တောင်သမန်သားလေး: Android Phone မှာ မှားဖျက်မိတဲ့ ဓါတ်ပုံများကို ပြန်လည်ရယူနည်း
Android Phone မှာ မှားဖျက်မိတဲ့ ဓါတ်ပုံများကို ပြန်လည်ရယူနည်း
သင့်ရဲ့ Android Phone , Tablet တို့မှာ မတော်တဆ ဓါတ်ပုံတွေကို ဖျက်မိသွားတဲ့ အဖြစ်အပျက်မျိုး ဖြစ်ဖူးကြမှာပါ။ အဲဒီအတွက်တော့ စိတ်ပျက်စရာမလိုပါဘူး။ Android Device တွေမှာ မှားဖျက်မိတဲ့ ဓါတ်ပုံများကို ပြန်လည်ရှာဖွေနိုင်တဲ့ နည်းလမ်းတွေ ရှိပါတယ်။ တစ်ခုအရေးကြီးတာက မှားဖျက်မိတာကို သိတာနဲ့ အလျှင်အမြန် ပြန်ရှာဖို့လိုပါတယ်။
ဓါတ်ပုံ၊ သီချင်း နဲ့ ဖိုင်များကို ဖျက်မိတဲ့အခါမှာ ဖုန်းထဲကနေ ချက်ချင်း ပျောက်သွားတာမဟုတ်ပါဘူး။ ဒေတာအသစ်တွေ ၀င်ရောက်လာမှသာ အဲဒီမှားဖျက်မိတဲ့ ဖိုင်တွေကို အမှန်တကယ် ဖျက်ဆီးလိုက်တာ ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီအတွက် ဒေတာအသစ်တွေ မ၀င်လာအောင် အရင်ဆုံး သင့်ဖုန်းမှာ WiFi နဲ့ Mobile Data ကို ပိတ်ပါ။
မှတ်ချက်။ ။ အခုဖြော်ပမယ့် နည်းလမ်းကို ပြုလုပ်ဖို့ သင့်ဖုန်းဟာ Root လုပ်ထားဖို့ လိုပါတယ်။
ပျောက်ဆုံးသွားတဲ့ ဓါတ်ပုံများကို ပြန်ရှာနည်း
Android Device မှာ ဓါတ်ပုံများကို ပြန်လည် ရှာဖွေနိုင်တဲ့ Programs များစွာ ရှိပေမယ့် Wondershare က ထုတ်တဲ့ Dr Fone for Android ရဲ့ ရလဒ်တွေက ကျေနပ်စရာဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီ Program ကို အောက်ပါ လင့်မှာ ရယူနိုင်ပါတယ်။
Dr Fone ကို ၀င်းဒိုး ပီစီမှာ အင်စတောလုပ်ပြီး ဖွင့်ပါ။
သင့်ရဲ့ စမတ်ဖုန်းကို USB ကြိုးကနေ တစ်ဆင့် ကွန်ပြူတာနဲ့ ချိတ်ဆက်ပါ။ ဖုန်းမှာ USB Debuggng ကို Enable လုပ်ပေးထားရပါမယ်။ မလုပ်ရသေးရင် Settings> Developer Options ထဲသွားပြီး USB Debugging ကို Enable လုပ်ပါ။ ( Developer Options ကို သင့်ဖုန်းရဲ့ Settings ထဲမှာ မတွေ့ရရင် Settings> About Phone ထဲသွားပြီး Build Number ကို ထပ်ခါ ထပ်ခါ နှိပ်ပါ။ Developer Options ကို Enable လုပ်ပြီးကြောင်း Notification တက်လာမှာဖြစ်ပါတယ်။
Dr Fone က သင့်ဖုန်းနဲ့ ချိတ်ဆက်မိပြီဆိုရင် ရှာဖွေချင်တဲ့ ဖိုင်အမျိုးအစားကို ရွေးချယ်ရမှာပါ။ Gallery ကိုရွေးပေးပါ။
နောက်အဆင့်မှာတော့ Deleted Files or All Files ကိုရွေးချယ်ရမှာပါ။ မှားဖျက်မိတဲ့ ဓါတ်ပုံတွေကို ရှာဖွေဖို့အတွက် Deleted Files ကိုရွေးချယ်ပေးပါ။ ဖုန်းမှာ Superuser Permission တောင်းခံရင် Accept လုပ်ပေးပါ။
ပြီးရင်တော့ Dr Fone က သင့်ဖုန်းကို Scan လုပ်မှာပါ။ သင့်ရဲ့ ဖုန်းမှာ Screen အချို့ ပေါ်ထွက်လာပြီး ဖုန်းဟာ Reboot ဖြစ်ချင်လည်း ဖြစ်သွားနိုင်ပါတယ်။ ဒီအတိုင်းထားပေးပါ။ Dr Fone က သင့်ဖုန်းမှာ အလုပ်များ လုပ်နေတာ ဖြစ်ပါတယ်။
Dr Fone က သင့်ဖုန်းကို Scan လုပ်ပြီးရင် ဖျက်ဆီးမိတဲ့ ဖိုင်များကို ပြပေးမှာပါ။ ပြန်လည်ရယူချင်တဲ့ ဖိုင်များကို Check Box မှာ ရွေးချယ်ပေးပြီး Recover ခလုတ်ကို နှိပ်ပါ။
Dr Fone ကို အသုံးပြုပြီး ဒီနည်းအတိုင်း ပြန်လည်ရယူနိုင်ပါတယ်။ သတိပြုစရာတစ်ခုက သင့်ဖုန်းမှ အရေးကြီး ဖိုင်များ၊ ဒေတာများကို ကွန်ပြူတာ၊ Portable Memory Stick, Drive တို့မှာ အမြဲတစ်စေ Backup ပြုလုပ်ထားသင့်ပါတယ်။
Credit - www.myanmardigitallife.com
Posted by lin linn at 4:54 AM
တရုတ်ရဲ့ Private Company က အာကာသယာဉ် လွှတ်တင်
Android ဖုန်းထဲ့မှာ ကြိုက်တာဒေါင်းလို့ရတဲ့ -Google Play Services 12.6.85 Apk
ဒွေး ဖြစ်ချင်တာဖြစ် မောင်ဘချစ် အစအဆုံး မြန်မာ့ရုပ်ရှင်
iCloud (or) Apple ID အကောင့် Free ဖွင့်နည်း
Android နဲ့ အလန်းစား Video တွေဖန်တီးနိုင်မယ့် Viva...
သွက်လက်လက် Facebook ဗားရှင်းသစ် 126.0.0.18.77
Android ဖုန်းမှ Microsoft Excel, Word, Powerpoint...
သင့်ဖွင့်ထားတဲ့ G-mail က လုံခြုံနေပြီလား ?
~~မြန်မာစကားပုံတွေလေ့လာနိုင်မည့်Proverb for Myanma...
ဖုန်း Screen ကို လက်ပွေ နဲ့ Lock လုပ်နိုင်တဲ့ - Sc...
sim card lockကျရသောအကြောင်းဗဟုသုတ
Android စက်ဖွင့်နည်း ၅ နည်း
Computer Keyboard ပေါ်က Function Key တွေကို ဘယ်နေရာ...
♪ “Browser တွေနဲ့ ထူးထူးခြားခြား အလုပ်လုပ်မယ်” ♫
♪ " (5) မိနစ်နဲ့ မိုဘိုင်းဖုန်းတစ်လုံး အားပြည့်စေန...
Mobile Phone Backlight Part 2
Mobile Phone Service သမားတွေအတွက် UNLOCKER V2
Coinbase Account ဖွင့်နည်း
♪ Android Device များအတွက် OS Update အမြန်ရအောင် ဖ...
♪ Huawei P10 ရဲ့ ပြဿနာများနဲ့ ဖြေရှင်းနည်းများ ♫
♪ ၂၀၁၇ ခုနှစ်အတွက် အကောင်းဆုံး အရွယ်သေး စမတ်ဖုန်းမ...
Mobile Phone Backlight Part 1
facebook သုံးတဲ့သူများအတွက် updater Version - Face...
♪ “Google Play ကို hack ကြည့်ရာဝယ်” ♫
♪ Facebook Messenger မှာ ဂိမ်းများ ကစားနည်း ♫
♪ " MPT ဧ။် MRA ၀န်ဆောင်မှုကို သက်သာသောနှုန်းထားမျာ...
♪ စာပြောင်းပြန်ရေးမယ် ♫
♪ ပုံနှစ်ပုံကို တစ်ပုံထဲဖြစ်အောင် ဒီဇိုင်းဆွဲပြီးေ...
Android Phone မှာ မှားဖျက်မိတဲ့ ဓါတ်ပုံများကို ပြန...
ဖုန်းကို တံခါးပေါက် နှင့် လော့ဖွင့်မယ်
♪ " နောက်ဆုံးရဈေးနှုန်းများ " (9.5.2017 ၊ အင်္ဂါနေ့တ...
♪ သင့်ဒေတာများကို Recover မလုပ်နိုင်အောင် Android ...
♪ သင့်ကို ဆေးလိပ်ဖြတ်ပေးမယ့် Android Apps ၅ ခု ♫
Android အသုံးပြုနည်း လက်စွဲ (Chateau Man)
IPHONE အသုံးပြုသူများနှင့် စက်ပြင်ဆရာလက်စွဲ
Telenor ကဒ်နဲ့ facebook Photo Lock ဖြေနည်း Pdf
Root ​ဖောက်​ရခြင်း၏ အ​ကြောင်း အရင်း (၁၀) ချက်​ ...
♪ Android Phone ကို လျှင်မြန်စွာ အားသွင်းနိုင်မယ့်...
♪ Android Phone ကနေ ဓါတ်ပုံကောင်းများ ရိုက်ကူးနိုင...
♪ “KMD Institute Engineering for Kids သင်တန်းနှင့်...
စိန်, ရွှေ မှအစ အုတ်၊သဲ၊မြေဧက များကိုပါ တိုင်းတာတွက...
Movie HD v4.5.0 (No Ads) [Latest Version]
ဒီနေ့ထွက် -Facebook Messenger 116.0.0.18.70 APK
♪ ဖျက်လိုက်ပြီးတဲ့ iPhone app တွေကို ဘယ်လို Instal...
Facebook အသုံးပြုနည်းပေါင်း (၁၀၀) ကျော် APK
Yoga Fitness App v6.1.51 [FULL]
မိုဘိုင်းဖုန်းမှ မြန်မာစာပြဿနာ (အင်တာနက် Browser မ...
တရုတ်ဘာသာစကားကို စာ နဲ့ရော အသံနဲ့ပါ သင်ယူနိုင်မယ့်...
အစိုးရ ရုံးဝန်ထမ်းတွေအတွက် ရုံးလုပ်ငန်းလက်စွဲ
Adobe Illustrator - မြန်မာလို စာအုပ်
♪ Android အတွက် အကောင်းဆုံး VPN Apps များ ( 2017 E...
♪ ၂၀၁၇ ခုနှစ်မှာ သင့်ကို ငွေရှာပေးမယ့် Mobile Apps...
Mi Flash Unlock Tool v2.2.406.5 (Update Version)
ထိုင်း Dtac အင်တာနက်စမက်နည်းများ
Frozen Zawgyi - Unicode Keyboard
All Easy Font APK
amaung 6.0.1 နှင့် Zawgyi ဖောင့်
ဘောလုံးချစ်သူများတွက် ဘောလုံးကီးဘုတ် (၇) မျိုး စိတ...
♪ Android အတွက် အသုံးဝင်တဲ့ Tips & Tricks များ ♫
♪ Google Chrome ကို ဆရာတစ်ဆူလို သုံးနိုင်မယ့် Tips...
► 2016 (2716)